यी हुन् गर्मीमा उपयोगी ६ तरकारी – ToplineKhabar
May 7, 2018 प्रदीप भट्ट0Comment
गर्मी मौसममा खानपानमा अलिकता लापरवाहीले पनि बिरामी पर्ने सम्भावना हुन्छ । जाडो मौसमको तुलनामा गर्मीमा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ । यस्तो बेला बढी तारेको या मसालायुक्त खाना धेरै खानुहुँदैंन । फुड प्वाइजनको समस्या हुने पनि यही मौसममा हो । त्यसैले यो मौसममा हल्का या सजिलै पच्ने खालको खाना खानुपर्छ । गर्मीमा यी तरकारी खानु उपयोगी मानिन्छ ः
← प्रचण्डका चार माग पूरा ! पार्टी एकतामा ‘ब्रेक थ्रू’
यी हुन् आफैलाई गोली हान्न लगाउने धर्म गुरु →
यौन इच्छा भएपछि महिलाले देखाउने ५ ब्यवहार
December 17, 2017 प्रदीप भट्ट 0
आन्दोलनरत डक्टरहरुले, आजदेखि हेल्मेट लगाएर उपचार गर्ने
October 3, 2017 प्रदीप भट्ट 0
गर्भावस्थामा सेक्स कति सुरक्षित ?
December 31, 2017 प्रदीप भट्ट 0